छाती हाम्रो, मर्जी अरुको ! | Rochak Khabar
म मोटी केटी थिएँ । त्यसैले सायद मेरा स्तन मेरै उमेरकी केटी भन्दा चाँडै विकसित भए । ११ वर्षको उमेरमा मलाई एउटा ब्राको जरुरी भयो । मेरी आमाले सदा यसलाई पहिरन अह्रानुभयो । अहिले पनि आमा त्यसरी नै कराउनहुन्छ, ‘सेप खराब होला ।’सेप भनेको के ? इमान्दारीका साथ भनूँ मेरा स्तन सधै उस्तै देखिन्छन् ।महिलाको एउटा अंग बाँध्ने(ब्रा)लाई सेक्सी भनिनु भ्रमपूर्ण प्रचार हो । ब्रालाई अक्सर सेक्सी भनिन्छ ।अबहाम्रो स्तन हाम्रो रहेन, पवित्रता, पाप वा लाजका कारण । मेरो स्तनका लागि सधैं आमाको अनुमति जरुरी भयो । कहिल्यै मैले मेरा स्तन मेरा अनुसार राख्न पाइनँ । मेरा बा र छिमेकीको उपस्थितिमा मैले ब्रा पहिरनै पर्ने भयो । उनीहरुका अघि म कहिल्यै भित्र ब्रा नलाएर बाहिर अर्कै लुगाका साथ पनि उपस्थित हुन सकिनँ ।मेरा स्तनलाई सार्वजनिक सवारीमा पुरुषबाट सुरक्षाको जरुरी भयो, जसले मलाई अपनमान गर्न चाहन्छ । मेरा सबै प्रेमी, जो मेरा स्तनको तारिफका गरेर कहिल्यै थाकेनन् । उनीहरु मेरा स्तनप्रति दिवाना थिए ।म कल्पना गर्थें कि मेरा सन्तान कस्ता होलान्, जब मेरा सन्तान हुन्छन् उनीहरु मेरो छातिसँग जोडिएका स्तनको दूध पिउँछन् । उनीहरुले स्तन गिलो बनाइदिए वा दाँतले टोकेर, नंग्राले चिथोरेर निशान बनाइदिए के होला ! किन स्तनका बारेमा पुरुषको कल्पना पनि यसैगरी उनीहरुकी आमाका साथ जोडिएर सुरु हुँदैन ?सबै महिलाको स्तन सिर्फ पुरुषको आवश्यकतता र उनका इच्छाका लागि हुन्छन् ।हरेक केटीको नारीत्वको दुःखपूर्ण यात्राको सुरुवातको प्रतिक हो स्तन । हाम्रा स्तनलाई किन सिर्फ शारीरिक नजरले मात्रै हेरिन्छ, यसमा अरु केही छैन ?किन हरेकले शरीरको यो भागमाथि दावी गर्न चाहन्छ ?मैले यो कुरा बुझिरहेकी छैन, एक महिला अर्की महिलालाई किन भन्छे, ‘तिम्रा स्तन साह्रै सुन्दर छन् ।’ वा उत्साहका साथ कराउँछे– वाह, हेर त कति राम्रा स्तन !’ठीक यसैगरी सिलिकन इम्प्लान्ट हामी सिर्फ पोर्न स्टार वा हिरोइनका कामका सम्झिन्छौं । किन फ्ल्याट छाती भएकी महिलालाई ‘म्यानचेष्टर’ भनिन्छ ?नग्नता संस्कृतिकै नयाँ लाजलाग्दो अवधारणा हो । पहिले यसलाई कला र उत्साहका रुपमा लिइन्थ्यो ।वास्तवमा यो पनि भनिन्छ ब्लाउजको प्रचलन आउनुअघि महिला माथिको कपडा पहिरदैनथे । महिला टपलेस रहेकोमा लाज पनि मान्दैनथे । प्राचीन मूर्ति हेर्नुहोस् एकपल्ट, तपाईंहरु थाहा पाउनुहुनेछ म के भन्ने चाहन्छु ?१८–१९औं शताब्दीमा महिलालाई स्तन ढाक्न मनाही थियो । ब्राह्मण छाडेर कोही पनि हिन्दू महिला आफ्ना स्तन छोप्ने बारेमा सोच्दैनथे– यस्तो गर्दा शालिनता गुमाएको आरोप खेप्नुपथ्र्याे । उच्च जातिकी महिला भने एउटा सेतो कपडाल स्तन छोप्न सक्थे । १९ औं शताब्दीसम्म भारतको त्रावणकोर, कोचीन । मालाबारमा कुनै महिलालाई आफ्ना स्तन छोप्ने अनुमति थिएन । अय्या वैजुंदरकोअ सर्थनमा केही समुदायले महिलाले पनि माथिल्लो शरीरमा समेत कपडा लगाउन पाउनुपर्ने भनेर लडाइ नै गरे । यसको प्रतिरोधमा १८१८मा उच्च जातिकाले हमला नै गरेका थिए । विभिध लडाइँका बाजुद १६ १५९मा मद्राका गर्भनरको दबाबमा त्राणकोरका राजाले घोषण गरे– सबै महिलाले माथिल्लो शरीरमा पनि लुगा लगाउन पाउनेछन् । तर, एउटा शर्त थियो, उच्च जातिका महिलाको पहिरनसँग मेल खानुहुँदैन ।आज हामी अर्काे एउटा लडाइँ लडिरहेका छौं ।यो सामग्री उनले नियमित लेख्ने आईचोक.इनबाट नेपाली रुपान्तरण गरिएको हो । फरक मत राख्ने रुचाउने लेखिका उपन्यासकार समेत हुन् । (स्वास्थ्य खबरबाट)
मेरो श्रीमान मसँग दिनकै तीन-चारचोटिसम्म सेक्स गर्नुहुन्छ तर ...? 3,387